lagu hayo Immigrant: codsanaysid magangalyo xuduudaha Maraykanka | USAHello
lagu hayo Immigrant: caawin dadka codsanaya magangelyo ku taalla xuduudda-US Mexico
Ma waxaad tahay labada dhinac ee xadka United States Mexico oo samayn aad u baahan tahay caawimaad? Ma waxaad raadineysaa hoy, taageero sharci, cuntada, iyo in laga caawiyo magangelyo? Ma waxaad tahay in lagu hayo waddanka u soo guurey? Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah khayraadka online iyo macluumaad ku saabsan ururada oo kaa caawin kara ama kaala talin.
Haddii aad la socdeen iyada oo Central America iyo ku talo jiraan in ay ka gudbaan xuduudda United States / Mexico, aad u baahan tahay in la ogaado in aad halis lagu meeleeyay lagu hayo waddanka u soo guurey haddii aadan haysan waraaqo ah oo kuu ogolaanaya in aad soo galaan dalka aad. Taas waxa loo sameeyaa ma aha oo kaliya in Maraykanka, laakiin Mexico, Guatemala, iyo El Salvador.
Helidda caawimaad labada dhinac ee soohdinta
On website-ka Malaa'igta Border, waxaad ka heli doontaa macluumaadka xiriirka degdegga ah ee kooxaha ee Mexico in ay bixiyaan gargaar soogalootiga cidhiidhi ku. Qaar ka mid ah dalab cuntada, biyaha, gargaar caafimaad, iyo hoy. Ururka Grupos Beta The, ee ku qoran boggan, ayaa meelo badan Mexico oo dhan.
Catholic Community Services Center Martigelinta Haweenka iyo Carruurta Migrant
The Center Martigelinta Services Catholic siinayaa safra meel nabdoon oo ay ku nasan, rehydrate, cunin, iyo daryeelka carruurtooda. Waxay bixiyaan dhar bedel ah, alaabta nadaafadda, iyo fursad ay ku soo maydho ilaa. Volunteers salaama Socdaalba iyo caawin iyaga la xiriir xubnaha qoyska iyo diyaarin gaadiidka baska. Haweenka iyo carruurta ay helaan bacaha safarka la waxyaabaha lagama maarmaanka ah ka buuxiyeen ka hor inta ay ka baxaan. Kuwa aan awoodin in ay maalinta ay sii daayay bixisaan habeenkii guriga ee iskaa wax u qabso ku kalsoon tahay ama Casa Alitas tago, guriga yar ee Tucson shaqeeya iskaa wax u qabso iyo Adeegyada Bulshada Catholic.
Imaanshaha xuduudda United States / Mexico
Haddii aad ku talajirto in ay magangalyo ee xadka United States / Mexico ama horay waxaa jira, waxaa jira khayraadka si ay kuugu hagaan si ammaanka iyo in ay maraan nidaamka socdaalka Maraykanka.
Waxaan ku mideysanahay: Project Asylum / Project Asylum
Waxaan ku mideysanahay (“Waxaan Ma United”) waa shabakad matalaad dhinaca sharciga ah oo ku saabsan soohdinta reer Mexico ee Ciudad Juarez. Volunteers ka guud ahaan dalka hagaan sharciga iyo adeegyada kale ee. Mashruuca waxaa maamula Al Otro Lado iyo CLINIC.
Florence Mashruuca Xuquuqda Immigrant
Mashruuca Xuquuqda Immigrant Florence ayaa soo ururiyay waraaqaha si ay u caawiyaan aad u daafici kiiskaaga. Qalabka waxaa ka mid ah waraaqaha in ay yihiin ilaha guud, waayo, ka dib marka lagu sii daayo ka hayo, dagaal aad masaafurinta hore ee qaaliga laanta socdaalka, iyo rafcaan kiiskaaga.
Waa maxay macluumaadka aan u baahan tahay marka aan dalbado magangalyo?
Waxaa jira dhawr xabbadood badan oo waraaqo aad isticmaali karto si ay u taageeraan kiiska magangelyada. Tani waa a bandhig ku saabsan dukumentiyada aad u isticmaali kartid in kiiskaada magangelyo iyo sida loo isticmaalo.
Si aad u hesho magangelyo USA, waxay ka caawisaa kiiskaaga haddii aad leedahay caddayn si ay u caddeeyaan aad ugu silcin jiray ama lagu xadgudbo, iyo in dowladda ma aad ilaaliso. cadayn badan oo aad fursad u fiican aad leedahay inay ku guuleysato kiiskaada magangelyo si ay u awoodaan in ay sii joogaan dalka Mareykanka.
U hubso in had iyo jeer runta sheeg, haddii kale aad isla markiiba kiiskaaga diidi karaa. Waxaad sidoo kale u baahan tahay in aad u gaar ah oo ku saabsan faahfaahinta. Waxaa muhiim ah in waqti la xasuusnaado waxa ku dhacay, on taariikhda saxda ah. Haddii aad khalad samayso, Dowladda wuxuu ku fikiraa inaad been.
Haddii aadan awoodin in ay keenaan dokumentiyo kuwan kula socdaa marka aad cararay dalkaagii hooyo, waa in aad u wanaagsan oo aan kala hadli kartaa adigoo diiwaangelinaya codsigaaga aad la.
United States Mexico Border- Baro Xuquuqdaada, Department of Labor
Carabi, English, Isbaanish, Soomaali, Urdu, Mandarin, Faransiiska, Hindi, iyo kuwa kala afka Punjabo. Buugagan soo guuray LGBTQ, dadka waaweyn, iyo carruurta aan cidina wehelin.
baakadda waxaa loogu talagalay si ay u bixiyaan muuqaalka guud ee xuquuqda muhaajiriinta (haddii halkan si sharci ah ama aan) ama xataa muwaadin jimicsi laga yaabaa in haddii ay ka tirsan waaxda socdaalka ka hor.
Xarunta Immigrant Justice Qaranka waxaa laga heli karaa si ay u bixiyaan talo sharci ah siiyaan gudbinta sharci. Waxaad la xiriiri kartaa Xarunta Qaranka ee Immigrant Justice lambarka toll free ay: (312) 263-0901.
qoraalkani u taagan yahay dadka ka cabsadeen inay dalkoodii ku noqdaan oo ay ugu Wacan inay Yihiin lesbian, gay, labeeb ama jinsi (LGBT) iyo / ama ay sabab u tahay xaaladda HIV. Waxaa laga yaabaa inaad difaac ka dhan ah masaafurin Haddaad ka Cabsataan laguu dhimi doono ama jirdilay haddii aad soo tarxiilay dalkaagii hooyo. Buugani waa Hanuun iyo khayraadka. Looguma tala gelin inuu kuugu adeego sidii bedel talo sharci ah. Waa in aad isku daydo inaad hesho qareen.
Waxaad ka akhrisan kartaa macluumaad this ee Isbaanish, Faransiiska, iyo Carabi.
Ogow buugagan Rights soo guuray xiray afaf kala duwan
buugagan waxay bixiyaan macluumaad aasaasi ah in English, Isbaanish. Faransiiska, Carabi iyo luuqado kale in la siiyo muhaajiriinta fahamka xuquuqda ay u leeyihiin sida waafaqsan sharciga US inta lagu jiro socdaalka ama haddii ay soo qabqabteen oo xireen by the Department of Homeland Security.
Ilaha-Se Pro magangalyo-doonka ku jira saarista
Ha aad u qalanto a T-visa?
visa T waa fiisaha in la soo saaro in dhibbanayaasha ka ganacsiga dadka, carruurta iyo dadka waaweyn. Waxaa jira dad badan oo la soo tahriibiyay USA si sharci darro ah oo ka dhan ah iyaga siday doonayeen on sheegashooyin aan jirin shaqo iyo faa'iidooyinka kale. Haddii ay taasi kugu dhacay, waxaad codsan kartaa noocan ah visa.
Ha aad u qalanto a U-visa?
aad ahaayeen dhibane denbi ah in ka dhacay Maraykanka? Ma caawin fulinta sharciga? aad ahaayeen dhaawici maxaa yeelay, denbiga? A U-Visa ogolaanaysaa dhibanayaasha dembiyada qaarkood, kuwaas oo ka soo baxaan shuruudaha qaarkood, joogto dalka Mareykanka ah.
Digniinta Khayaanada Anti
Magangalyo-doonka warbixin - updates news
Macluumaadka on this page ka timaadaa CLINIC, ka Immigrant Xarunta Sharciga Resource (ILRC), The Justice Center Immigrant Qaranka (NIJC), oo kale ku kalsoon tahay ilaha. Waxaa loogu talagalay hanuun iyo waa la cusboonaysiiyaa inta badan ee suurtogalka. USAHello ma siiyo talo sharci ah, mana ka mid ah waxyaabaha aannu loogu tala galay in la qaado, sida la-talin sharci. Haddii aad raadineyso qareen lacag la'aan ah ama qiime jaban ah ama caawimaad sharci, waxaan kaa caawin karnaa hesho adeegyada sharci oo bilaash ah iyo qiimo-yar.